Al-Shabaab oo sheegay inuu geeriyooday Askarigii labaad ee Faransiiska – idalenews.com
Al-Shabaab oo sheegay inuu geeriyooday Askarigii labaad ee Faransiiska
Al-Shabaab ayaa sheegtay inuu geeriyooday askarigii Faransiiska ee ku dhaawacmay howl galkii fashilmay ee labo cisho ka hor ciidamada Kumandoska Faransiiska ku qaadeen deegaanka Buulo Mareer ee Koofurta Soomaaliya.
Afhayeen u hadlay Al-Shabaab ayaa sheegay in dhaawicii soo gaaray Askariga Faransiiska uu u geeriyooday, balse ay soo bandhigi doonaan meydkiisa.
Faransiiska ayaa jimcihii la soo dhaafay u diray Soomaaliya ciidamo soo furta Sarkaal ka tirsanaa Ciidamada Sirdoonka Faransiiska oo lagu magacaabo Denis Allex oo 2009-kii lagu afduubtay Soomaaliya.
Afhayeenka howl galada Al-Shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab ayaa u sheegay Reuters in askariga labaad ee Kumandoska uu u dhintay rasaastii la is dhaafsaday howl galkii Buulo Mareert.
“Askariga labaad ee Faransiiska waxaa uu u dhintay rasaastii uu ku dhawacmay, waxaa soo bandhigi doonaa meydadka labo askari Faransiis ah”ayuu yiri Abuu Muscab.
Sabtidii ayaa Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollaned sheegay in labo ka mid ah ciidamadooda iyo la heystihii Danil Allex ay ku dhinteen howl galkii lagu furan lahaa sarkaalkaasay ku dhinteen howl gal
Howl galka ay Soomaaliya ku qaadeen Faransiiska ayaa yimid saacado kadib markii Ciidamada Faransiiska ay fara gelin milateri ku sameeyeen wadanka ku yaala Galbeedka Afrika ee Mali, halkaasoo Kooxo islaamiyiin ay isku dayayeen inay afgambiyaan dowladda Mali.
Maamulka Gobolka Sh/Dhexe oo ka hadlay xirnaanshaha shirkadihii Xawaaladaha ee Jowhar
Meydka Askarigii Kumandoska Faransiiska oo la soo bandhigay